Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. मनसुन शुरु भएसंगै मोरङका किसान धान रोपाइमा – Emountain TV
मनसुन शुरु भएसंगै मोरङका किसान धान रोपाइमा
विराटनगर, २६ असार । मोरङमा आकासेपानीको भरमा धान रोपाईं गर्ने अधिकांस किसानहरु असारको तेस्रो साताबाट धान रोपाईंको चटारोमा व्यस्त हुन थालेका छन् । ढिलो शुरु भएको मनसुनले किसानहरुलाई चिन्तित बनाएको थियो ।
तर पछिल्लो केही दिनयता भारी बर्षा हुन थालेपपछी किसानहरुमा रोपाईंको चटारो शुरु भएको हो । मनसुन सक्रिय भएर बर्षा त भयो तर रोपाईंका लागि आवश्यक डिएपी मल नपाउँदा भने कृषकहरु निरास भएका छन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड बिराटनगरमो डिएपी मलको अभाव छ । गोदाममा अहिले तीन सय टन पोटास र दुई सय ५१ टन युरिया मल छ तर रोपाईंको शुरु अवधिमा चाहिने डिएपी भने छैन । डिएपीको अभावमा धान रोपाई गर्न नपाएको किसानहरुको गुनासो छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड विराटनगरले मल लिन आएका कृषकहरुलाइै डिएपी मल नभएको भन्दै फर्काउने गरेको छ । डिएपी मलको माग बमोजिम आपुर्ति गर्न नसकेकाले मौज्दात नभएका कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड विराटनगरले जनाएको छ ।
तत्काल आवश्यक नपर्ने मलको मौज्दात छ तर किसानका लागि तत्काल चाहिने मल भने अभाव रहेको छ । जसका कारण कृषकहरुले समयमै रोपाइ गर्न पाएका छैनन । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कृषकलाई मल अनुदानमा दिंदै आएको छ तर यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा किसानहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् ।